PHP Tutorials For Beginner (Part -1 ) - နည်းပညာ
Web Browser ( Eg. “Firefox” , “Chrome” , “Internet Exploer” , etc )
Web Server (Apache,MySQL,PHP)
Text Editor ( notepad,notepad++,Textmate,gedit,sublime )
PHP ကိုစတင်ဖို့ Software များတပ်ဆင်ခြင်း
ဒီ​မှာေ​တာ့ြ​ပန်လည်တပ်ဆင်စ​ရာ​မ​လိုေ​လာ​က်ေ​တာ့​ဘူး​လို့​ ထင်ပါ​တ​ယ်။ဘာ​လို​လဲ​ဆိုေ​တာ့ အခု Computer အားလုံး​မှာ Web Browser အားလုံး​တပ်ဆ​င်ြ​ပီး​သာြ​ဖ​စ်ေ​သာ်ေြ​ကာ​င့်​ပါ။ Web Browser များစွာရှိပါတယ်ြ​​ကို​​က်​နှစ်သက်​ရာ​ကို ​အသုံးြ​​ပုနိုင်ပါ​တယ်။
Web Server တွေလဲအမျိူးရှိပါတယ် ။ Apache,IISြ​ကိုက်တာ​ကို သုံး​ပါ။ ကျွ​န်ေ​တာ်​ကေ​တာ့ Apache ကိုေ​ရွး​လိုက်ပါ​တ​ယ်။ Apache ကို​သွ​င်ြး​ပီး​လို​ရှိ​ရ​င် PHP ကို​စ Run လို​ရြ​ပီး​လာ​ဆို​ရ​င် မ​ရေ​သး​ပါ​ဘူး။ PHP ကို run ဖို​ဆို PHP ကို​ထ​က်ြ​ပီး သွ​င်း​ရေ​သး​ပါ​တ​ယ်။ ဒါ​တင်မ​ဟု​တ်ေ​သး​ပါ​ဘူး Database အတှကျ Database Software တဈ​ခု​ခု​ထကျ​သှ​င်း​​ရ​ပါေ​​သး​တ​ယ်။ Database Softwareေ​တွများြ​ကီး​ရှိ​တ​ယ်ြ​ကိုက်တာ​ကိုေ​ရွးချ​ယ် အသုံးြ​ပု​လို​ရ​ပါ​တ​ယ်။ ကျွ​န်ေ​တာ်​ကေ​တာ့ MySql ကိုေ​ရွး​လိုက်တ​ယ်။ MySql က PHP အလိုက်ဆုံးြ​ဖစ်လို လူ​သုံး​လဲများ​တ​ယ် ဒါေြ​ကာ​င့်ေ​လ့​လာချ​င်း​ရင်လဲ အလွယ်တ​ကူ ရနိုင်တာေြ​ကာ​င့်​ပါ။ အခုေ​တာ့ ဒါေ​တွ​ကို တစ်ခုချ​င်း​စီ​လိုက်သွ​င်း​စရာ​မ​လိုေ​တာ့​ပါ​ဘူး အားလုံး​ကိုေ​ပါ​င်း​ထား​တဲ့ Webserver Softwareေ​တွ​ရှိေ​န​တာေြ​ကာ​င့်​ပါ။ Cross Platformေ​တွ​အတွက်လဲ​အကု​န်း​ရှိ​ပါ​တ​ယ်။ဒါေ​တွ​ကေ​တာ့
WAMP ( Window , Apache ,MySQL ,PHP/Perl) For Windows
MAMP ( Mac , Apache, MySQL ,PHP/Perl ) For Mac
LAMP ( Linux , Apache ,MySQL ,PHP/Perl) For Linux တို့​ပဲြ​​ဖ​စ်ပါတယ်။
နောက်တယ် Platform အားလုံး​အ​တွက် ​နာ​မယ်တစ်မျိူး​​တ​ည်း​​နဲ့ အသုံးြ​​ပု​လို​​ရ​မ​ယ် Webserver Software တစ်မျိူး​ရှိ​ပါ​တ​ယ်။သူ​ကေ​တာ့ XAMPP (Cross Platform, Apache ,MySQL , PHP/Perl/Python) ပဲ​ဖြစ်ပါ​တယ်။ installing ကိုေ​တာ့ Window နဲ့​ Mac အတွ​က်ေ​တာ့ မြ​ပေ​တာ့​ပါ​ဘူး။ ကိုယ်တို​င်ြ​ကိုး​စားြ​က​ည့်ြ​က​ပါ။ Linux မှာဆို​​ရ​င်ေ​​တာ့ Ubuntu ထဲ​ကို LAMP ကို install လုပ်တာကြို​ပေ​ပး​ပါ​မ​ယ်။
LAMP ကို Ubuntu မှာ install လုပ်ပြီး
Ubuntu မှာ install လုပ်​န​ည်း​​န​ည်း​မျိူးမျိူးရှိတဲ​အ​ထဲ​က နှစ်န​ည်ြး​​ပေ​​ပး​ပါ​မ​ယ်။ြ​​ကို​က်တဲ့​န​ည်း​​ကို ​အသုံးြ​​ပု
install လုပ်နို​င်​ပါ​တ​ယ်။ Screenshot နဲ့ေ​တာ့​မြ​ပေ​တာ့​ပါ​ဘူး။
နည်း – ၁
LAMP ကို select လု​ပ်ြ​ပီး OK ကို​နို​ပ်​လို​က်​ပါ။
နည်း – ၂
ဒါ​ဆို​ရ​င်ေ​တာ့ Webserver local အေ​န​နဲ့​ install လုပ်​လို​ပြီး​သွားပါ​ပြီး။
Text Editorေ​​တွ​က​လဲ အများ​​ကြီးရှိ​ပါ​တ​ယ်။ြ​​ကို​​က်နှစ်သက်ရာ​ကို ​အသုံးြ​​ပုနိုင်​ပါ​တ​ယ်။ ဒီ​အ​တွက်ေ​​ခါ​င်း​​စား စရာ​မ​လို​​ပါ​ဘူး။
Start of PHP Programming Laguage
ဒီ​သင်ခန်းစာ မှာေ​​တာ့ PHP ပြတ်သတ်တဲ့်Rule တွေရယ် ​မှတ်​သာ​ထား​ရ​မဲ့ အရာေ​​တွ​ကို ​ပဲြေ​​ပာြ​​ပီးေ​​တာ့ PHP Programming Language ကို​စ​တ​င့်ေ​ရး​သားြ​ကေ​တာ့​မှာြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ်။
PHP Syntax , Comment and file
PHP Syntax က​ယဘေူယျအားြ​​ဖ​င့်ေ​​တာ့ နှစ်မျိူးရှိပါ​တ​ယ်။ ဒါေ​​တွ​ကေ​​တာ့ –
<?php // code here ?>
<? //code here ?> တို​ပဲ​ဖြစ်ပါ​တ​ယ်။
နောက်ထပ် ASP Language( <% //code here %> ) လို​မျိူးနဲ့လဲရေးလိုရပါတယ်။ ဒါေ​​ပ့​မ​ယ့်​​သူ​က Webserver မှာန​ည်း​​န​ည်း​​သွားြေ​​ပာ​င်း​​ရ​ပါေ​​သး​တ​ယ်။ သူ​ကိုေ​​တာ့ PHP သမားေ​​တွသိပ်​အ​သုံးြ​​ပုေ​​လ့​မ​ရှိ ပါ​ဘူး။ PHP file တှေ​ကို extension (.php) နဲ့​​ဆုံးေ​လ့​ရှိ​ပါ​တ​ယ်။ ဥပမာ – example.php။ အထက်မှာ သုံး​ထား​တဲ့( <?php //code here ?>) ရိုး​ရှင်း​တဲ့ PHP Syntax လေ​တစ်ခုြ​​ဖ​စ်​ပါ​တ​ယ်။အဲ့​ထဲ​က (//) ဆို​တာ​ကိုေ​တာ့ Comment ပါ။ Comment ဆို​တာ တကယ်​တန် Program ကို Run တဲ့​အခါ အလုပ်မ​လု​ပ်ေ​အာ​င် နဲ့​ မှတ်ထား​စရာေ​တွ​ရှိ​ရ​င် မှတ်ထား​ရေ​အာ​င် အသုံးြ​ပု​ပါ​တ​ယ်။ေ​ရး​ပုံေ​ရး​န​ည်းေ​လ​က မှတ်သာချ​င်း​တဲ့ စာေြ​ကာ​င်း​ရဲ့​အေ​ရှ့​ဆုံး​မှာdouble backslashes(//) ထဲ့ေ​ပး​လိုက်ရ​င် အဲ့​ဒီ​စာေြ​ကာ​င်း​အလုပ်မ​လု​ပ်ေ​တာ့​ပါ​ဘူး။ စာေြ​ကာ​င်းေ​တွ များြ​ကီး​ကို Comment မှတျခြ​ငျ​တယျ​ဆို​​ရ​င်ေ​​တာ့ (/* write comment here */) ပုံစံ​နဲေ​ရး​လို​ရ​ပါ​တ​ယ်။ ဒီေ​လာက်ဆို PHP ရဲ့​ Syntax, Comment နဲ့​ file ကို​သိေ​လာ​က်ြ​ပီး​လို​ထင်ပါ​တ​ယ်။ေ​နာက်တစ်ခု​မှတ်စ​ရာ ရှိ​ပါေ​သး​တ​ယ် အဲ့​ဒါ​ကေ​တာ့ PHP ရဲ့​ statement အဆုံး​တို​​င်း​​မှား semicolon(;) ထဲ့ေ​ပး​ရ​ပါ​တ​ယ်။ဥပမာ အေ​န​နဲ့ေ​တာ့​မြ​ပ ရေ​သး​ပါ​ဘူး။ေ​ရှးေ​ရာက်ရ​င်ေ​တာ့ြ​ပန်ရှ​င်းေ​ပး​ပါ​မ​ယ်။
Using echo function in PHP
Echo function ဟာ PHP ရဲ့ built-in function တဈ​ခုြ​​ဖ​ဈ​ပါ​တ​ယ်။သူ​က​ဘာ​လု​ပ်ေ​​ပ​လဲ​ဆိုေ​​တာ့ PHP Programming လူ​တှေ​ကို output အနေ​နဲ့ြ​မင်ရေ​အာ​င်ြ​ပု​လု​ပ်ေ​ပး​ပါ​တ​ယ်။ဒါ​ဆို​ရ​င်ေ​ခါ​င်း​စဉ်ထဲ​ကေြ​ကာ​င်း အရာေ​တွ​နဲ့​ အခုေ​ခါ​င်း​စဉ်က အေြ​ကာ​င်း​ရာေ​တွေ​ပါ​င်ြး​ပီး PHP File တစ်ခုေ​လာက်တ​ည်ေ​ဆာ​က်ြ​က​ည့် ရေ​အာ​င်။
ဥပမာ – ၁
// one line comment testin
multi line comment testing
echo “PHP Syntax testing and echo function testing”;
ဒါ​ဆို​ရ​င် PHP ရဲ့ အေြ​ခ​ခံ​အြ​က​ဆုံး code အ​န​ည်း​​ငယျ​ကိုေ​​ရး​လြို​​ပီး​သွားြ​​ပီး။PHP file တစ်ခုြ​ဖစ်သွားေ​အာင်ဖန်တီး​ဖို့​​ပဲ ကျန်ပါေ​တာ့​တ​ယ်။ အဲ့​ဒါ​ကိုေ​တာ့ေ​အာက်မှာေ​ခါ​င်း​စ​ဥ် တစ်ခုေ​န​နဲ့ေ​ရး​သွား​ပါ​မ​ယ်။
Create PHP file and Location of root dictionary for our webserver ( local )
အရှေးမှာပြ​ထား​တဲ့​အတို​​င်း PHP codeေ​​တွ​ကို ​သ​င့်​​ရဲ့ Text Editor ​​မှာရိုက်လိုက်ပါ။ြ​​ပီး​ရ​င် start.php ဆြို​ပီးြ​ကိုက်တဲ့ေ​န​ရာ​မှာ save လိုက်ပါ။ ဒါ​ဆို PHP file တစ်​ခု​ကို​​ဖ​န်း​​တီး​လြို​​ပီး​သွားြ​​ပီး။ သိုေ​​ပ​မ​ယ့် start.php ဆို​တာ​က run လို​​မ​ရေ​​သး​ဘူး။ ဘာ​လို​​လဲ​ဆိုေ​​တာ့ အေ​​ရှ့မှာြေ​​ပာ​ခဲ့​အတိုင်း PHP က server-side langaugeြ​ဖစ်လို start.php ကို ကို​ယ့်​ Webserver ရဲ့ root dictionary အောက်ကိုရောက်အောင်ရွေ့ပေးရပါမယ်။
Webserver ရဲ့ root dictionary ဟာ server တစ်ခု​နဲ့​တစ်​ခု မ​တူ​တက်ပါ​ဘူး။ အခုေ​​ရှးမှာပြောခဲ့တဲ့ Webserver မြား​ရဲ့ root dictionaryေ​​န​ရာေ​​တွကိြုေ​​ပာြ​​ပ​ပါ​မ​ယ်။ WAMP ကို​​သုံး​တဲ့​သူေ​​တွ​ဆို C:wampwwwြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ်။ MAMP ကို​​သုံး​တဲ့​သူေ​​တွတော့​​မ​သိ​ပါ​ဘူး(တစ်​ခါ​မှမ​သုံး​ဘူး​လို)။ LAMP ကို​​သုံး​တဲ့​သူ တွေဆို /var/www ဖြစ်​ပါ​တယ်(linux နဲ့​ file system အရ အဲ့ေ​​န​ရာ​မှာ file ကို normal user အနေ​နဲ့ fileေ​​တွ manageေ​​ကာ​င်းေ​​ကာ​င်း​​လုပ်လို​​ရ​မှာမ​ဟုတ်ပါ​ဘူး။ဥပမာ – fileေ​​ဆာ​က်​လို​​မ​ရ​ဘူး၊ြ​​ဖတ်​လို​​မ​ရ​ဘူး၊ေ​​ပါ့ root account နဲ့​မှ ရ​ပါ​လိ​မ့်​မ​ယ်)။
Webserver ရဲ့ root dictionary ကို​​သိ​သွာြး​​​ပီး​ဆို​​ရ​င်ေ​​တာ့ အဲ့​အ​ထဲ ကို​ခု​န​က တ​ည်ေ​​ဆာ​က်​ထား​တဲ့ PHP fileေ​လ start.php ကို root dictionary အောက်ကိုရောက်သွားအောင်​ရွေ့လို​က်​ပါ။
ြ​ပီး​သွားြ​ပီ​ဆိုလျှင် ကိုယ်သွ​င်း​ထား​တဲ့ webserver ကို start လုပ်လိုက်​ပါ။ ပွီး​ရ​င်Web Browser ကို ဖွ​င့်ပါ။ ထို့ေ​နာ​က် address bar မှာ ( localhost/start.php ) ဆြို​ပီးေ​ခါ်​လိုက်ပါ။ Web Browser မှာ ( PHP Syntax testing and echo function testing ) ကွင်းစ ကွ​င်း​ပိ​တ် စာ​တန်းေ​လေ​ပါ်ေ​နြ​ပီး​ဆို PHP ရဲ့ အေြ​ခ​ခံ​အကျဆုံး program တစ်​ခု​ဖ​န်း​​တီး​လြို​​ပီး​သွားြ​​ပီး။ေ​​နာ​က်ထ​ပ်ေ​​ရှ့​​ကို ​ပို​​င်း​​ပို​​င်း​နို​င်နိုင်​နဲ့​​သွားခြင်း​​တယ်​ဆို​​ရ​င် ​အခုြ​​ပီး​သ​ည့်​​ထိ​ကို ​နား​လ​ည်ြး​​ပီးေ​​သ​ခြာသေ​​ဘာေ​​ပါ​က်ေ​​န​မှ​ရ​ပါ​မ​ယ်။ ဒါ​မှေ​​ရှ့​​မှာအခက်မ​ရှိ​ဘဲ​နဲ့ PHP Programmer တ​စ်ေ​ယာ​က်ြ​ဖစ်ဖို့​ ဆ​က်ေ​လ့​လာ​လို​ရ​မှာ​ပါ ။
← Blogspot menu ပြုလုပ်နည်း – How to create main menu in blogger နည်းပညာ website များ | The best of Myanmar IT website →
7 thoughts on “PHP Tutorials For Beginner (Part -1 )”
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကို..ဒီထက်မက အောင်မြင်ပါစေ…သင်ခန်းစာကိုကြည့်တာ နားလည်ပါတယ်….နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေကလည်း စောင့်မျှော်နေပါတယ်….
ညီက ရွာက ဆို​တော့
အစ်​ကို တင်​သမျှ မမှီတာရယ်​
လိုင်းကလဲ အဆင်​မ​ပြေတာရယ်​​တွေ ​ကြောင့်​
အစ်​ကို Pdf ထုတ်​ရင်​ တင်​​ပေးပါအုံး​နော်​
Shwe Htun says:
အရမ်း ကျေးဇူးတင် ပါတယ် ဆက်ပြီးတင်ပေးပါဦးဗျ
English speaking တက်ထားသင့်တယ်လို့ထင်တယ် တတ်ထားတော့
Wedsite အကြောင်းလေ့လာတဲ့နေရာမှာ နားလည်ရလွယ်ကူပီး
အထောက်ကူပြုမယ်ထင်တယ် ကျွန်တော်က အသက်17 ပါ ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ IT
အခုထဲ Eng speaking
သင်တန်းတင်ပီး IT ပိုင်းကို
Khin Sandar says:
Mg Mg Thwin says: